एउटै प्रश्न पत्रकारले सोधेको सोधै गरेपछि देउवा रिसले फायर ! – Pahilo Update
एउटै प्रश्न पत्रकारले सोधेको सोधै गरेपछि देउवा रिसले फायर !
‘त्यसो भए अविश्वासको प्रस्ताव कसले ल्याइदिनुपर्ने, जसपाले कि माओवादीले ?’ भन्दै राखेको प्रश्नमा देउवाले कांग्रेस विपक्षी पार्टी भएकाले विपक्षमै बस्ने बताएका थिए ।
त्यसपछि पत्रकारले ‘त्यसो भए अहिलेकै सरकारलाई समर्थन गरेर जाने अवस्था हो ?’ भन्दै प्रश्न सोधेपछि देउवा रिसाएका थिए । “हत्तेरिका ! विपक्षी पार्टी विपक्षमा हुँदैन ?” पत्रकारले बुझ्दै नबुझी प्रश्न गरेकाले आक्रोशित देउवाले भने, “विपक्षी पार्टी ! विपक्षी पार्टी विपक्षी पार्टी ! जानुहोस् ।” खासगरी कांग्रेस विपक्षमा बस्छ भनेपछि पनि यही सरकारलाई समर्थन हो भन्ने प्रश्नपछि देउवा रिसाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री संसद् विघटन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, समर्थन फिर्ता लिने अवस्था छैन’
यौ!न सम्पर्क गर्नु अगाडि यस्तो गर्नुभयो भने म*हिला सन्तुष्ट हुन्छन्